Izindaba - Ungawukhetha kanjani umshini wokusika ingilazi?
1. Ukukhethwa: ngokuya ngosayizi wangempela wokusika webhizinisi uqobo, khetha okulungele wena ngokwakho, imodeli yomshini wengilazi2621: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, imodeli 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, imodeli3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm
Ukubheka isisekelo sesakhiwo sefektri, ngoba sifaka ukugqokwa kwemishini ejwayelekile kanye nokutshalwa kwemali okungenamsebenzi.
2. ukusika ukunemba: ngokwezidingo zakho zangempela ongakhetha kuzo.
3.ijubane lokusika: isivinini sokusika kungukusebenza okukhulu komshini wokusika, okuyingxenye kuphela yemishini nokulawula ukusebenza jikelele nokuhambisana kwezimo ezinhle, umshini wokusika ukufeza isivinini esihambisanayo, ngakho-ke akunandaba
yini isivinini sangempela esidingekayo? Ijubane lomshini wokusika liyinkomba enhle yokusebenza komshini wokusika abazoba khona.
Umsebenzi we-optimization we-othomathikhi wokuzenzakalela: izinga lokusebenzisa ingilazi liyisiqinisekiso esibalulekile sezinga lesilinganiso sokusika ingilazi, ikhompiyutha uma ukusebenziseka kahle kwezocansi kungahle kungazuzi imiphumela engcono.Umsebenzi wokuthi ukuguqulwa kwesibili kwesandla ngemuva kokwenza kahle kuzoba ukwahlulela okubalulekile inkomba yokuthuthuka kohlelo lokusebenzisa.
5. ingxenye yemishini: ukuzinza nokunemba kwesiqinisekiso, eyokuqala yingxenye yemiklamo yokwakhiwa nokufakwa kobungqingili kuzoba yizici ezibalulekile.Ukuqinisekisa ubushelelezi bengxenye yomshini kanye nokufana kwesitimela somhlahlandlela ezinhlangothini zombili , ukuthi ungavimbela kanjani ukusonteka nokushintsha ngemuva kokulungiswa kwesimo yingxenye ebalulekile yokuhlolwa kwemishini.
Umsebenzi we-6.umsebenzi wokusika umshini nakho kuyisibonakaliso esibalulekile sokuqinisekisa ukusebenza komshini wokusika.Ingakwazi ukulungisa ngokuzenzakalela ingcindezi, umsebenzi wokuskena othomathikhi, ingakwazi ukuhamba ngo-360 ° mahhala, ukufaka ilebula okuzenzakalelayo, noma ngabe kunomsebenzi wamkhawulo wamathuluzi njalo njalo.
Isikhathi sokuthumela: Mar-17-2021